Indonezia " Journey-Assist -Misy momba an'i Indonezia
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia
Manintona mpizahatany i Indonesia miaraka amin'ireo nosy mahafinaritra azy, volkano, voromanitra madio ary ireo tempoly taloha. Firenena ity izay be mpitia noho ny hatsarany tsy dia mahafinaritra ary manana tsirony manokana. Tsy azo atao ny manaitaitra feno mandritra ny dia iray. Rehefa mifidy fitsangatsanganana any Indonezia, ny mpandeha matetika dia aleony toerana toa an'i Bali, Gili ary Lombok.
Faritra sy trano fandraisam-bahiny
Ny renivohitr'ity firenena ity dia Jakarta, izay tanàn-dehibe lehibe sy misy lafiny maro ary misy feo maro. Ao amin'ity fon'ny fanjakana Silamo lehibe indrindra rehetra ity dia afaka mahita zavatra mahaliana maro ianao. Ny fahantrana eto dia miaraka akaiky amin'ny harena, lalana mitabataba noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana be - miaraka amin'ireo nosy mangina, fomban-drazana taloha - miaraka amin'ny kolontsaina marobe.
Ny fiainana tsara tarehy dia mifantoka indrindra amin'ny atsimon'i Jakarta, izay toerana misy ireo mpifanolo trano fonenana. Ao afovoan-tanàna dia mahita fizahana mahaliana maro ianao, ary any avaratr'i Jakarta misy trano fisakafoanana maro sy tsena lehibe. Any amin'ireo faritra andrefana, tsapa ny soratan'ny kolonely avy any Holandy, ary toerana atsinanana ny faritra atsinanana.
Ny Distrikan'ny Nosy an'arivony dia ampahany manokana eto Jakarta. Ny valan-javaboary, izay miorina eo amin'ny Ranomasin'i Java, dia miavaka amin'ny fandriampahalemana sy filaminana.
Na izany aza, tsy liana amin'ny renivohitra ny ankamaroan'ny mpizahatany, fa any amin'ireo nosy indonezianina malaza. Ny tena malaza amin'izy ireo dia ny Bali, izay misy morontsiraka mahafinaritra, volkano mahatahotra ary fotodrafitrasa fizahan-tany mandroso. Ny nosy Denpasar dia miavaka amin'ny fiadanany sy ny fitoniany, misy tempoly, tranombakoka ary tsena maro loko. Kuta dia nosy maresaka feno bara mora vidy sy fahafaha-manao surf. Nosy be tabataba ihany koa i Seminyak, fa ho an'ireo mpizahatany manankarena kosa no kendrena, ary i Sanur dia mety indrindra amin'ny fialantsasatry ny mpianakavy.
Kalimantan, izay ampahany ihany amin'i Indonesia, dia fanta-daza amin'ny toetra tsara indrindra. Manodidina ny 10 isan-jaton'ny mponina no olona Dayak, ka raha toa ka very ny fotoana. Any afovoan'ny nosy dia mitombo ny ala mikitroka ary misy renirano marobe, any atsimo dia misy fambolena sy saha be mitsoka any atsimo.
Betsaka ny zavatra mahaliana voajanahary sy maritrano ao amin'ny nosy Sumatra: any amin'ny tanàna dia ahitanao moske, tranombakoka, lapa, amin'ny valan-javaboary - ala, volkano, farihy. Ny Nosy Sulawesi dia toerana iray iarahan'ny fomban-drazana taloha amin'ny fisitrihana mandroso. Java dia nosy be mponina be dia be miaraka amina toerana mahafinaritra, fambolena dite ary tempoly taloha. I Lombok dia malaza amin'ny morontsiraka lao, malalaka sy madio, rakotra fasika fotsy beige. Batam sy Bintan dia manana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fialantsasatra manara-penitra, manomboka amin'ny trano fandraisam-bahiny mihaja ka hatrany amin'ny foibe spa sy golf.
Ny iray amin'ireo zavatra mahaliana indrindra any Indonezia dia ny Tempolista Bodista Borobudur. Tamin'ny andro taloha, ny nosy Java dia tsy nifikitra tamin'ny toerana iray, ary noho izany dia nanova ny toerany hatrany izy, namakivaky ny ranomasina, izay tsy nahatonga ny ahiahy teo an-toerana. Nanapa-kevitra izy ireo fa hanamboatra ilay nosy amin'ny alàlan'ny fantsika mankany afovoan-tany. Ary rehefa afaka fotoana vitsivitsy, dia nisy havoana iray niorina manodidina ny tendrombohitra, izay nanodidina ny mponin'ilay nosy nanorina tempoly, ahitana ny fampianarana Buddhista ny valo mitondra mankany amin'ny fahazavana, ny dingana ary maneho ny firaisana amin'ny avo miaraka amin'ny any ambany, ny lanitra sy ny Tany, andriamanitra miaraka amin'ny olona. Ny rihana voalohany, ambanin'ny tranobe dia midika tontolo tontolo filan'ny nofo, ny gorodona efatra manaraka dia niresaka ny ady amin'ny olona miaraka amin'ireo faniriany, ary ny andian-tsambo telo farany dia tandindona ny fomba hahazoana fandriampahalemana tanteraka, nirvana
Any Indonezia, ny taona dia mizara fizaran-taona 2 - maina (martsa-septambra) ary lena (novambra-martsa). Ny vanin-taona dia fotoanan'ny orana eo an-toerana, matetika amin'ny alina. Ireo dia ranonorana mivatravatra (hatramin'ny 2 ora) misy oram-baratra. Amin'ny fotoana toy izany dia misy ny olana amin'ny fitaterana, ny antsitrika ary ny fitsangantsanganana any an-tendrombohitra.
Ny isotherm isan-taona any amin'ny faritra samihafa dia manomboka amin'ny +26 ka hatramin'ny 35. Ny rano eo akaikin'ny morontsiraka dia manana maripana +26 na +27 mandritra ny taona. Ny volana mafana indrindra dia ny Aogositra sy Jolay.
Miseho in-droa isan'andro ny rano. Tranga iray azo antoka izany. Manakaiky ny hotely tsirairay avy amin'ny isan'ny tora-pasika izay eo akaikiny misy latabatra iray manondro ny fotoana misy ny ony ary midina amin'ity toerana ity.
Tena samy hafa ny flora sy ny biby any Indonezia - na dia ampahany ihany amin'ny 1,3% -n'ny tany eran-tany aza ny firenena dia manodidina ny 17% amin'ireo karazana biolojika rehetra eto an-tany no hita ao amin'ny faritaniny. Amin'ny isan'ireo karazam-biby sy zavamaniry miaina sy mitombo amin'ny faritany, ny faharoa no mankany Brezila ihany. Raha mihevitra ny fanjakan'ny biby ihany isika, dia tsy misy mitovy amin'ny harena manankarena any Indonezia. I Costa Rica irery ihany no afaka miady hevitra momba izany (jereo ny zava-misy mahaliana momba an'i Costa Rica). Indonesia dia saika 60% rakotra ala maitso maloto hatrany. Any Indonezia, misy volkano 150 eo ho eo .. Ny anarana hoe "Indonesia" dia nadika ara-bakiteny avy amin'ny teny grika dia midika hoe "Island India" .Indonesia no voalohany eran'izao tontolo izao amin'ny famokarana voaniho, menaka palma ary sarivava.
Ary eo koa, any Indonesia, dia misy ny karazan'akoho mainty tanteraka antsoina hoe Ayam Tsemani. Ireo vorona ireo dia tsy vatosoa mainty ihany, fa misy taolana sy taolana mainty ihany koa.
Ho an'ny Rosiana sy olompirenena Okrainiana dia azo atao ny fidirana ao Indonezia raha tsy mahazo visa mandritra ny 30 andro. Na izany aza, mila manoratra mialoha ny politikanao ianao amin'ny fitsangatsanganana iray manontolo.
Ny vola avy any ivelany dia azo ampidirina amina vola; ny sandam-pirenena dia azo aondrana amin'ny vola rupees indonezianina 50, ary tsy maintsy ambara izany. Ny fanafarana tsy misy enta-mavesatra hatramin'ny sigara 200, hatramin'ny sigara 50, hatramin'ny sigara 100 g, ka hatramin'ny 2 litatra misy zava-pisotro misy alikaola. Ny zava-manitra dia azo ampidirina fotsiny.
Voarara ny manafatra fiomanana amin'ny pharmacological, biby, zavamaniry, zava-mahadomelina, voankazo, fitaovam-piadiana, sary mamoafady, fakana bala. Ny fahazoan-dàlana manokana dia takiana amin'ny fanafarana ireo vorona tsy fahita firy, ny akorandriaka ary ny antikristy. Fitaovana sary mirakitra, fitaovana video, fitaovana audio dia tsy maintsy voasoratra ao anaty fanafarana sy fanondranana.
Ireo mpankafy sigara mifoka rongony mandritra ny ambiny dia tokony hahafantatra fa ny fiezahana manafatra zava-mahadomelina ao amin'ity firenena ity dia miatrika sazy henjana, hatramin'ny fanamelohana ho faty.
Ny mpizahatany vahiny iray no afaka mahazo 10 isan-jato eo ho eo izay nolaniana tamin'ny fakana sary tany Indonezia. Na izany aza, ity programa ity (VAT Refund) dia tsy voararan'ny mpivarotra rehetra: ireo famantarana mifanentana dia hita any amin'ny faritra fivarotana lehibe any Bali sy Jakarta ihany. Saingy na dia rehefa nahita azy ireo aza ianao dia mila mividy entana mitentina 500 rupees Indonezia, alao antoka fa mangataka ny mpivarotra hangataka invoice ianao, alohan'ny hanoloranao ny pasipaoronao. Ny vokatra sy ny zava-pisotro sy ny vokatra vita amin'ny paraky dia tsy rakotry ny VAT Refund.
Ny entana novidy dia tsy maintsy amboarina amin'ny endrika kitapo fanampiny tsy mihoatra ny iray volana aorian'ny fividianana, manolotra eny amin'ny seranam-piaramanidina mandritra ny fifehezana ny fadin-tseranana miaraka amin'ny fahazoana entana, invoice, tapakila fiaramanidina ary pasipaoro vahiny. Ny habetsaky ny vola dia navoaka amin'ny vola na namindra amin'ny carte banky.
Ho an'ny fandresena lavitra any Indonezia dia mety indrindra ny mampiasa fiaramanidina. Matetika io ihany no hany fitaterana azo atao. Rehefa dinihina tokoa, ny firenena dia ahitana nosy efa ho 18. Ny kaompaniam-pitaterana an-trano malaza indrindra dia Garuda. Maharitra adiny 000 ny sidina mankany Denpasar avy any Jakarta, ary efa ho 3 ora mankany Batam.
Any Java ihany no mandroso ny fitaterana an-dalamby, misy ihany koa ny fizarana fohy 2 hafa ao Sumatra. Ny orinasan-dalamby Indoneziana dia antsoina hoe Kereta Api. Mizara ho sokajy maromaro ny lamasinina: "toekarena" (seza mafy, kojakoja kely indrindra), "orinasa" (fiara milay kokoa, fa tsy misy fividianana rivotra), kilasy voalohany (faladiany, seza mivalona, ​​fifehezana rivotra, sakafo maimaimpoana). Ny fitsangatsanganana an-dalamby dia mahazo aina, saingy lafo be ny vidiny.
Ireo fiara fitateram-bahoaka dia be kalitao avo lenta, fiara maoderina izay mandroso amin'ny fandaharam-potoana henjana. Ny làlana sasany dia misy fiampitana amin'ny sambo avy amin'ny nosy iray mankany amin'ny iray hafa. Mila mividy tapakila iray ianao amin'ny andro alohan'ny fitsangatsanganana any amin'ny gara na amin'ny biraon'ny orinasan'ny bus. Ny vidiny dia faritan'ny orinasa mpitatitra entana, ny halaviran-davitra sy ny fahazoana mony.
Mivoatra tsara ny fitaterana rano: manana seranan-tsambo 300 eo i Indonezia, izay miara-manompo 14 isan-taona ny mpandeha. Ny tambajotram-by lehibe indrindra dia an'ny PELNI, ny lehibe indrindra amin'ny indostria dia ny ASDP. Azo atao ny miondrana an-tsambo mankany Sumatra avy any Java ao anatin'ny 000 ora mandritra ny 000 2 ropia any Indonezia, avy any Ketapang mankany Bali - ao anatin'ny antsasak'adiny ho an'ny 15 000 rupees.
Ny bus ao an-tanàna dia efa antitra. Ny saran-dalana dia aloa amin'ny famindrana vola amin'ny mpamily na mpitarika. Ankoatr'izay, mendrika ny manara-maso ny sarany takiana amin'ny mpandeha hafa: ny vidin'ny dia lavitra raha ny amin'ny halaviran-dàlana dia hatrany amin'ny 5 ropia, fa betsaka kosa ny azon'ny vahiny vazaha tsy fantatra.
Mikasika ny taxi, ny fiara dia hita eo amin'ny parking, tratra an-dalambe, baiko an-tariby na amin'ny hotely. Alohan'ny hidirana dia asaina hanaiky avy hatrany ny vidiny, tsara kokoa ny mandoa vola amin'ny vola Indoneziana. Na dia manaiky ny dolara amerikana aza ny ankamaroan'ny mpamily fiarakaretsaka (indrindra amin'ny toerana be mpizahatany), nefa amin'ny taha ratsy. Misy ny kaontera ao anaty taksibe ara-dalàna, mila manamarina fotsiny ianao mba tsy "hadino" ny mpamily hamelona ny fitaovany alohan'ny hanombohany ny hetsika. Ny vidin'ny mahazatra any amin'ny tanàn-dehibe dia 6 500 ropia ho an'ny kilometatra voalohany ary 3 500 rupees ho an'ny manaraka.
Any an-tanàna dia misy minibus kely ihany koa, izay antsoina hoe "bemo" eto, taxi-moto (antsoina hoe "odzhek"), sarety soavaly ary koa omby, posy misy karazany isan-karazany: "angkot" (miaraka amin'ny kamio sy minivan niova fo), "bajaj" (miaraka amin'ny scooter moto misy seza misy kodiarana ho an'ny mpandeha) sy "bechak" (misy bisikileta).
Ny fifandraisana an-telefaona dia mandrakotra tsara ny nosy lehibe kokoa na kely kokoa. Ireo mpandraharaha finday malaza indrindra eto amin'ny firenena dia Telkomsel, Indosat, XL. Azonao atao ny mividy karatra SIM amin'ny salon manokana, fivarotana lehibe na fivarotana amoron-dalana. Ny fifandraisana amin'ny seranam-piaramanidina dia tsy soso-kevitra, satria matetika dia avo roa heny ny vidiny.
Raha mpivavaka be ny ankamaroan'ny mponin'i Bali, dia ambany ny heloka bevava, avy eo, ohatra, amin'ny Kut dia mitandrina kokoa fa tsy manao fitafiana lafo vidy sy firavaka. Tsy voalaza ny hamela zavatra amin'ny tora-pasika tsy misy fepetra. Toroana hanatanteraka ny fifanakalozana fifanakalozana vola amin'ny mpanakalo vola ofisialy, aza midradradradra ny tenanao amin'ny vidin'ny fifanakalozana mahomby amin'ny arabe.
Ny rano mikoriana avy amin'ny paompy dia tsy ampiasaina. Tsara kokoa ny mividy rano any amin'ny fivarotana. Mbola tsy ilaina ny mampiasa ny ranomandry voajanahary, satria matetika no omena amin'ny rano fisotro mitovy izany. Ny fampiasana sunscreens dia tsara indrindra.